लिम्पियाधुरा र लिपुलेकविनाको नेपालको नक्सा राखेर कसले छाप्यो पाठ्यपुस्तक ? « Janata Samachar
लिम्पियाधुरा र लिपुलेकविनाको नेपालको नक्सा राखेर कसले छाप्यो पाठ्यपुस्तक ?
काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकविनाको पुरानो नक्सा छापेर बिक्री वितरण गरिरकेको पाठ्यपुस्तक जफत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकविनाको नक्सा छापेर बिक्री वितरण भैरहेका पाठ्यपुस्तक जफत गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रकाशक र बिक्रेताले पुरानो किताबको कभर परिवर्तन गरी पुस्तक बिक्री गरेको जानकारी पाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो । देशको ाँच पुग्नेगरी पुरानो नक्सा उल्लेख गरी पुस्तक बिक्रि गरेको पाईए तत्काल प्रहरी प्रशासन लगाएर कारबाही गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो ।
केही निजी प्रकाशकले नेपालको पुरानो नक्सा छापेर विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको पाइएपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्यस्तो पुस्तक जफत गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिनु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पाठ्यक्रम विकास तथा मुल्याङ्कन परिषदको बुधवारको बैठकमा पुस्तक प्रकाशक र बिक्रेतालाई कानूनको दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिनु भएको छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले पुरानो नक्सा राखी नयाँ पुस्तक बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
अधिकांश बिक्रेताले नेपालको पुरानो नक्सा उल्लेख गरी बिक्री गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले पुरानो नक्सा छापेर पुस्तक बिक्री गरेका प्रकाशक र बिक्रेतामाथि कारबाही प्रकृया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
अधिकांश पुस्तक प्रकाशक र बिक्रेताले सामाजिक शिक्षा, जिके लगायतका पुस्तकमा पुरानै नक्सा राखेर छपाइ गरेको पाईएको छ । बैठकले विभिन्न विषयका कक्षा ६–८को पाठयक्रम स्वीकृत गरेको छ ।